Ihotele yaseMohonk Mountain House eNew York: Umgcini kaMongameli owakhiwe ngamawele angamaQuaker
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Ihotele yaseMohonk Mountain House eNew York: Umgcini kaMongameli owakhiwe ngamawele angamaQuaker
Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Resorts • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
by IStanley Turkel CMHS ihotele-online.com
Indlu yeNtaba yaseMohonk
Ibhalwe ngu IStanley Turkel CMHS ihotele-online.com
Ngomnyaka we-1869, u-Albert Smiley, utitshala othanda indalo waseQuaker, wathenga ipropathi ngexabiso elihle- iihektare ezingama-300 ezijikeleze ichibi kunye nendawo yokutyela kwindawo entle yendalo embindini weehektare ezingama-26,000 kwiiNtaba zeShawangunk, eNew York . Kungekudala izokwakhiwa iya kuba yiNdlu yeNtaba yaseMohonk.
UAlfred noAlbert Smiley, amawele azinikeleyo angamaQuaker, enza indawo yokuchithela iiholide ngo-1869 xa bathenga iChibi laseMohonk kuJohn F. Stokes.
Njengokuba ooSmileys bandisa ihotele yaseMohonk Mountain House, basebenza ngokungqinelana neenkolelo zabo zamaQuaker: akukho tywala, ukudanisa, ukutshaya okanye ukudlala amakhadi.
Ihotele ibinikeza iikonsathi, iiseshoni zokuthandaza, izifundo kunye nokuqubha, ukuhamba intaba nokuhamba ngesikhephe.
Phantsi kobunini obuqhubekayo kunye nolawulo lwamalungu osapho lakwaSmiley kangangeminyaka eli-144, iNdlu yeNtaba yaseMohonk inamagumbi okundwendwela angama-267, amagumbi okutyela amathathu aphangaleleyo, iindawo zokucima umlilo ezili-138, iibhalkhoni ezingama-238, indawo yokuzivavanya kunye neendawo zokuzilolonga kunye nephuli entle eshushu yangaphakathi. Indawo yokuphumla ibandakanya igalufa, intenetya, ukukhwela ihashe, ukuhamba ngesikhephe, igadi eneentyatyambo, indawo yokugcina izityalo, i-gazebo ye-rustic eyi-125, imyuziyam, indawo yokujonga i-Sky Top Tower, kunye nerink yokuloba ngaphandle.
Indawo yokuphumla yonyaka wonke ihlala abantu abakhenkethi kunye neenkomfa ngesicwangciso esipheleleyo saseMelika apho amaxabiso obusuku aquka isidlo sakusasa, isidlo sasemini, isidlo sangokuhlwa kunye neti yasemva kwemini kunye neicookies. Ehlotyeni, i-buffet yangaphandle yesidlo sasemini iyafumaneka eGranary ebekwe kwiliwa elibukekayo elijonge eLake Mohonk.
Iindwendwe zabakhenkethi zinokukhwela amahashe, zihambe ngesikhephe echibini, zidlale intenetya, ikroyi, kunye nebhola ekhatywayo, ndwendwela indawo yokugcina kunye nokugcina indlu eluhlaza, ndikhwela iinqwelo, ukuqubha okanye ukuloba echibini, ukufumana unyango lwe-spa, ndwendwela iziko lokomelela, udlale igalufa, mamela iikhonsathi kunye neentetho, ukunyuka iindledlana zeentaba, ukuhambahamba kwiigadi ezisemthethweni kunye nemaze, ukukhwela iibhayisekile, okanye ukunyuka amatye. Imisebenzi yasebusika ibandakanya ukukhwela ikhephu, ukuskiya kwilizwekazi, kunye nokutyibiliza ngomkhenkce. Indawo yokutyelela ivuliwe unyaka wonke.
Indlu yeNtaba yaseMohonk ibibambe iindwendwe ezininzi ezidumileyo kule minyaka idlulileyo, njengoJohn D. Rockefeller, isazi sendalo uJohn Burroughs, Andrew Carnegie, kunye nomongameli waseMelika uTheodore Roosevelt, uWilliam Howard Taft, uRutherford B. Hayes, kunye noChester A. Arthur. Iindwendwe zibandakanya owayesakuba liNenekazi lokuqala u-Julia Grant, umbhali wenoveli u-Thomas Mann kunye neenkokheli zenkolo ezifana no-Rabbi Louis Finkelstein, uMfundisi u-Ralph W. Sockman kunye noMfundisi u-Francis Edward Clark.
Ukususela ngo-1883 ukuya ku-1916, iinkomfa zonyaka zenzeka kwi-Mohonk Mountain House, ezixhaswe ngu-Albert Smiley, ukuphucula umgangatho wokuphila wabantu baseMerika baseMerika. Ezi ntlanganiso zidibanise abameli bakarhulumente beBhunga leMicimbi yase-Indiya kunye neNdlu kunye neekomiti zeNdlu yeeNgwevu kwimicimbi yase-Indiya, kunye nabafundisi-ntsapho, kunye neenkokheli zase-India ukuxoxa malunga nokwenziwa komgaqo-nkqubo. Iirekhodi ezingama-22,000 ezivela kwiingxelo ezingama-34 zenkomfa ngoku zikwithala leencwadi laseHaverford College kubaphandi nakwimbali yaseMelika.
Ihotele ikwasingathe iNkomfa yeLake Mohonk kuLamlo lwaMazwe ngaMazwe phakathi konyaka we-1895 nowe-1916, nowaba negalelo ekudaleni iNkundla eSisigxina yoLamlo eHague, eNetherlands. La maphepha enkomfa anikezelwa lusapho lakwaSmiley kwiKholeji yaseSwarthmore kuphando oluzayo.
Olona lwakhiwo luphambili lweNdlu yeNtaba yaseMohonk lwatyunjelwa ukuba luphawu lweMbali yeSizwe ngo-1986. Olu bizo lwaluhlukile kuba lwalungabandakanyi iNdlu yeNtaba kuphela kodwa nezinye izakhiwo ezingama-83 zaseMohonk ezinembali ebalulekileyo nezingqonge iihektare ezingama-7,800 XNUMX zomhlaba ophuhlisiweyo nongaphuhliswanga. Ilungu le Iihotele zeMbali waseMelika ukusukela ngo-1991, u-Mohonk ufumene ibhaso kwiNkqubo yokusiNgqongileyo yeZizwe eziManyeneyo yokuqonda iminyaka eli-130 yobugosa bendalo.
UStanley Turkel waqeshwa njengoMbali ka2020 woNyaka ziiMbali iihotele zaseMelika, inkqubo esemthethweni yeNational Trust yoLondolozo lweMbali, awayethe wabizwa ngalo ngaphambili ngo-2015 nango-2014. UTurkel ngoyena mcebisi wehotele upapashwe ngokubanzi eMelika. Usebenza indawo yakhe yokubonisana ehotele esebenza njengengqina lengcali kumatyala anxulumene neehotele, ebonelela ngolawulo lweeasethi kunye nokubonisana ngokuthengisa imali ehotele. Uqinisekisiwe njenge-Master Hotel Supplier Emeritus yiZiko leMfundo le-American Hotel kunye ne-Lodging Association. [imeyile ikhuselwe] 917-628-8549
Incwadi yakhe entsha ethi "Great American Hotel Architects Volume 2" isandula kupapashwa.
Ezinye iincwadi zeehotele ezipapashiweyo:
Ihotele eNkulu yaseMelika: Oovulindlela beshishini leehotele (2009)
Yakhelwe Ukugqibela: Iihotele ezili-100 + zeNdala eNew York (ngo-2011)
Eyakhelwe ukuGcina: i-100 + zeMinyaka eNdala yeehotele eMpuma ye-Mississippi (ngo-2013)
Ihotele iMavens: uLucius M. Boomer, uGeorge C. Boldt, uOscar waseWaldorf (2014)
I-Great American Hoteliers Umqulu 2: Oovulindlela kwi-Hotel Industry (2016)
Yakhelwe Ukugqibela: Iihotele ezili-100 + zeNdala eziDala eNtshona eMississippi (2017)
Ihotele Mavens Umqulu 2: UHenry Morrison Flagler, uHenry Bradley Plant, uCarl Graham Fisher (2018)
I-Great American Hotel Architects uMqulu I (2019)
Ihotele Mavens: Umqulu 3: UBob noLarry Tisch, uRalph Hitz, uCesar Ritz, uCurt Strand
Zonke ezi ncwadi zinokuodolwa kwi-AuthorHouse ngokundwendwela www.stanleyturkel.com kwaye ucofa isihloko sencwadi.
IStanley Turkel CMHS ihotele-online.com
Fumanisa iiRolli zeentsuku ezinomdla kwiNkcubeko yeGenoa
Ngubani oza kubamba i-UEFA Euro 2028?
Ukuqhuma kweVolcano eHawaii kuyila umoya ombi ...
IFransi iqokelela imvula eneasidi evela kwiiCanary Islands ...
Abantu aba-4 babulawa kwingozi yenqwelomoya yaseConnecticut
Isebe likarhulumente wase-US: Sukuya eCanada
IRoyal Caribbean izisa iiNqanawa ezintsha zeJamaica e ...
Iihotele zeLotte kunye neeResorts Amagama kwi-CEO eNtsha yaseMelika
I-EU ikhuthaze ukuba iyeke ukwaphula umthetho kwabasebenzi baseAlitalia ...
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide zeMGM zongeza iCosmopolitan yaseLas Vegas kwi ...
Iisandali Resorts Izipho zeCaribbean iiOlimpiki ...
Abakhenkethi abane baseRussia babulawa, i-16 Yenzakele eTurkey ...
I-Seychelles ebabazekayo yemifanekiso yokuThintela iindwendwe ezivela ...
Yonke iThailand ngoku ivulela iindwendwe ngaphandle ...
Ukuhamba kwe-US: Kulumkele ukubuyela umva ngokungeyomfuneko kuQoqosho ...
Abasixhenxe babulawa kwisiphithiphithi senqwelomoya saseKabul njengayo yonke intengiso ...
I-COVID-19 ibulala uhambo lweshishini laseMelika
Isixhobo esitsha soKhuseleko kubakhenkethi samaPolisa aseSpain eCamino ...
Urhulumente Konke: Ukuvuselelwa noHlaziyo eIndiya ...
ISri Lanka iyaqhubeka nokutshixa ngokutsha njengoko ukufa kwe-COVID kusanda
Njengoko izithintelo zokuhamba e-US zilula, uhambo olusuka e-UK luya ...
UMphathiswa waseSeychelles ophakamisa umyalezo kuKhenketho lweHlabathi ...
Ubusuku kunye neenkwenkwezi zeMuvi, ilizwe elihle le ...
I-UK iyayekisa imithetho yokungena kwabaphambukeli abagonywe ngokupheleleyo
Ilifu elinetyhefu ngaphezulu kweJamani emva kokuqhuma kweMichiza
Iindiza ezisuka eBangkok zisiya eSamui, eChiang Mai, ePhuket ...
Ngubani umphathiswa omtsha wezokhenketho waseIran, Hon. Seyed ...
UMzantsi Afrika unoMphathiswa wezoKhenketho omtsha: Ngubani ...
Amaqabane eBhunga lamaShishini oMsitho kunye neKhowudi ...
Indoda igwetywe iminyaka emihlanu entolongweni ngokusasaza i-COVID ...
IDoha iya eAlmaty iinqwelomoya kwiQatar Airways ngoku
Iinqwelomoya zase Mzantsi Afrika ngoku kunye neUnited Airlines kunye ...
Imigaqo emitsha yeMida yeeNdwendwe zaseKhanada: Amazwe ali-10 aseMelika ...
Ukufika ngenqanawa yokuhamba ngenqanawa kwiCarnival Sunrise eJamaica namhlanje
Umhlaba wabakhenkethi bakwa-Israeli eTanzania kunye nokunye okuzayo
Ukugqithiselwa eDoha, Abu Dhabi, Dubai: Abakhweli beenqwelo moya ...
Undwendwelo lweCarlsbad lubhengeza iGosa eliyiNtloko lesiGqeba sokuLawula
Amabhaso oKhenketho kwiHlabathi liphela abhengeza abaphumeleleyo kwihlabathi liphela ...
Ukhenketho lwaseIndiya ludanile kwinqanaba leNkqubo eNtsha
IOfisi yabakhenkethi yaseBahamas eParis ivalwa ngenxa yeNtsha ...
Iimbadada Royal Curaçao ziindaba ezimnandi kukhenketho lweCuracao
Abahlali baseNew Orleans bayalelwe ukuba baphume njengeNkanyamba ...
Isikhephe esinokuntywila sitshona kufutshane neCanary Islands, ngabantu abangama-52 ...
I-Seychelles yoKhenketho kunye ne-Emirates Airlines ibamba iGCC Media
Iziqithi zeCanary 'zikhuselekile' utsho ...
Eyokuqala eJamaica: IJakes Ihotele ifikelela kwi-100% ...
Ezi zezona ziXeko ziPhambili zeFoodie eMelika ngo-2021
Ukhenketho lwaseMelika luqhwaba ukuvulwa kwakhona kweCanada Border
Ukuhamba kwe-US: Isithintelo sohambo lwe-EU siyadanisa